Soomaaliya, 21 May 2019
Ururka Somalisches Komitee oo afurin u sameeya dadka danta yar
Ururka Somalisches Komitee ee fadhigiisu yahay dalka Jarmalka, ayaa gudaha Soomaaliya ka sameeya xilliyad Ramadaanta afurinta dadka danta yar. Waxa uu ururkaasi sidoo kale caawiyaa ilmaha aan awoodin waxbarashada iyo nolosha aas'asiga ah.
Maxaa muranka geliyey sharciga batroolka?
Sharciga batroolka ee maanta la ansixiyey ayaa waxaa diiday hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada oo sheegay inay doonayaan in sharcigaasi laga soo celiyo baarlamaanka si wadatashi loo geliyo.
Aqalka Hoose oo ansixiyey sharciga batroolka
Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay degmada Xamar Weyne gaar ahana dhabarka dambe ee taallada SYL.
Somaliland ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabado loogu dabaal degayo 28 guuraddii ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'dey Soomaaliya inteeda kale.